Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Mudug oo bogaadiyey habka loo qaaday Imtixaanka Shahaadiga ah ee Puntland. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Mudug oo bogaadiyey habka loo qaaday Imtixaanka Shahaadiga ah ee Puntland.
Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Mudug oo bogaadiyey habka loo qaaday Imtixaanka Shahaadiga ah ee Puntland.
Gaalkacyo :- Gudoonka Waxbarashada Gobolka Mudug ayaa Kulan qado sharaf ah u sameeyay Macalimiintii iyo Kormeerayashii kayimid gobolada kale,kuwasoo Galkacyo u joogay ilaalinta Imtixaanka Shahaadiga ah ee Sanad Dugsiyeedka 2017-2018.
Axmed Huruuse Gudoomiyaha Waxbarashada Gobolka Mudug ayaa uga mahadceliyey howlwadeenada sida xilkasnimada leh ee ay u guteen waajibaadka wasaaradda waxbarashada iyo Tacliinta sare Puntland “waxan rabaa inaan idin ku dhiirigeliyo shaqada adag ee aad ummada u haysaan,waayo masuuliyadu waa xil adag oo u bahan in si gaar ah looga taxadaro,khayrkeedana waa helaysaan ,waayo waxaynu gallay bishii Ramadaan ee Barakaysnayd” Gudoomiyaha Waxbarashadda Gobolka Mudug Axmed Huruuse.
Macalimiinta,Kormeerayasha oo ka kala yimi magaalooyinka kale ee Puntland waxaa ay ka mahadceliyeen sidii bahda waxbarashada Gobolku ay doorkooda uga qateen qaadista Imtixaanka,waxaa kaloo ay ku booriyeen in la iska kaashado tayeynta iyo horumarinta tacliinta guud ahaan deegaanadda Puntland.
Wasaaradda Waxbarashadda Dowladda Puntland ayaa soo afmeertay Imtixaanka Shahaadiga ah oo si isku mid ah uga wada bilowday dugsiyada Puntland,fasalada 4aad ee dugsiyada sare & fasalada 8aad ee Dugsiyada Dhexe.